किफायती र बलियो एसईओ निगरानी उपकरणहरू
सोमवार, जुन 4, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
हाम्रो आँखा लाग्यो SERPS.com केहि समयको लागि। संस्थापक स्कट Krager हामीलाई प्रारम्भिक संस्करणहरू देखायो र हामी वास्तवमै प्रभावित भयौं। हामीले हाम्रो हिस्सा प्रयोग गरेका छौं SEO निगरानी उपकरणहरू पहिले। यद्यपि SEO परिवर्तन गर्न जारी छ... र धेरै उपकरणहरू बस राखिएको छैन।
स्कटको टीमले परिवर्तनलाई अँगालेको छ र वास्तवमै एकदम फरक प्रणालीको साथ आएको छ ... सीधा समाहित गर्ने क्षमताको साथ Google विश्लेषण, सामाजिक संकेतकहरूको निगरानी गर्नुहोस्, नाप्नुहोस् परिदृश्यहरू परीक्षण गर्नुहोस् - सबै किफायती एक चिकना प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस को माध्यम बाट। यो केवल एक स्टार्टर प्लेटफर्म होइन, यद्यपि ... SERPs ले तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ 65 देशहरूमा!
स्कट प्लेटफर्ममा यी4प्रमुख विभेदकर्ताहरू औंल्याउँछ:
हाम्रो SEO परीक्षणहरू सुविधा वास्तवमै सफा छ। Clic क्लिकहरू र तपाई एउटा एसईओ सम्बन्ध परीक्षण सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ के काम गरीरहेको छ र तपाईको स्थानमा के छैन भनेर हेर्न।
हाम्रो दैनिक कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण यसका साथ जोडिएको छ Google विश्लेषण त्यसोभए तपाईं एक झलकमा यो देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको लागि कम-फांसीको फल केहि दिनको लागि हो।
ड्यासबोर्डले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ साइटहरू मार्फत द्रुत चक्र र प्रत्येक साइटमा आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस्। महान यदि तपाइँ बहु साइटहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्छ।
हाम्रो पृष्ठ-स्तर दृश्य चार्टमा रैंकिंग, यातायात, र सामाजिक मेट्रिक्स बीचको सहसंबंधहरू सजिलैसँग हेर्न दिन्छ जुन तपाईंको आँखामा रगत बग्दैन।
यहाँ छ SERPs को एक नजर लुक्दै आउँदै छ एसईओ निगरानी ड्यासबोर्ड सुविधाहरु र कार्यक्षमता:
जबकि त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरूको लागत सयौं वा हजारौं प्रति महिना, SERPs प्रति महिना $ at मा सुरू हुन्छ... त्यस्तो मूल्य जुन कि कुनै पनि बजारले किन्न सक्दछ (र यसको फाइदा लिनुपर्दछ)। तिनीहरूको सब भन्दा ठुलो प्याकेजले तपाईंलाई keywords keywords पृष्ठमा 1,000 $ for को लागि १००० कुञ्जी शव्दहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ ... खराब छैन। तपाइँको सुरू गर्नुहोस् अब १ day दिने परीक्षण!
टैग: Google विश्लेषणएसईओएसईओ अनुगमनएसईओ प्लेटफार्मएसईओ परीक्षणएसईओ उपकरणएसईओ उपकरणसर्प
या मित्रहरू यो सत्य हो कि गुगल एनालिटिक्स एक राम्रो एसईओ उपकरण र वेबमास्टर उपकरण पनि हो